Cricket: India's upcoming tours of Sri Lanka, Zimbabwe cancelled due to covid-19 pandemic
Virat Kohli and his men were scheduled to travel to Sri Lanka on June 24 for three ODIs, three T20Is. The Zimbabwe tour was from August 22.
Jun 12, 2020 · 02:26 pm
The Indian cricket team’s upcoming tours of Sri Lanka and Zimbabwe have been cancelled by the Board of Control for Cricket in India, due to the threat of coronavirus.
Virat Kohli and his men were scheduled to travel to Sri Lanka on June 24 for three ODIs, three T20Is. The Zimbabwe tour was from August 22, consisting of three ODIs.
In a press release, BCCI Honorary Secretary Jay Shah, said:
The Indian Cricket Team will not travel to Sri Lanka and Zimbabwe owing to the current threat of COVID-19. Team India was originally scheduled to travel to the island nation from 24th June 2020 for three ODIs and as many T20Is and to Zimbabwe for a series comprising three ODIs starting 22nd August 2020.
As stated in the earlier press release issued on May 17, the BCCI will conduct a camp for its contracted players only when it is completely safe to train outdoors. The BCCI is determined to take steps towards the resumption of international and domestic cricket, but it will not rush into any decision that will jeopardize the efforts put in by the Central and State governments and several other respective agencies in containing the spread of the coronavirus.